स्वागत » पुरुषको रेट्रो बक्सर, सेक्सी रग्बी क्लासिक
यदि महिलाहरूसँग अधिकार छ Shorty कसले उनलाई मूल्यमा राख्छ, पुरुषहरू पनि! यो बक्करले मलाशनी वक्रहरूमा पूर्ण रूपमा प्रशस्त गर्दछ, र दिनभरि ठूलो सान्त्वना दिन्छ। तर यो सबै होइन। यो एक अद्वितीय रेट्रो शैली को खेल पनि गर्छ, जसको सबै आकर्षण हो। त्यसोभए, तपाईं यसलाई प्रयास गर्न तयार हुनुहुन्छ?
रेट्रो शैली, आधुनिक आराम
यसको रिट्रो लुकले तपाईंलाई सताउन सक्छ। रेट्रो ठाडो छ! एक पटक फेरि, त्यो स्टेसन को सामने फिर्ता आउँछ र सेक्सी रग्बी बुटी तपाईं एक नयाँ टुक्रा प्रदान गर्दछ वर्तमान रुझान को अनुकूलित। यो बाकस ब्ल्याकमा उपलब्ध विभिन्न आकारहरूमा आउँछ, जुन एम, एल, एक्सएल र एक्सएक्सएल हो। बक्सरले तंग फिट प्रदान गर्दछ, जसले पहननेको लागि राम्रो सहयोग र सान्त्वना सुनिश्चित गर्दछ।
आफैलाई 1950 वर्षमा प्रत्यक्ष रूपमा यसको अद्वितीय शैलीद्वारा प्रेरित गरौं। यदि यो यसको उपस्थिति द्वारा रेट्रो देखिन्छ भने, यो यसको कट र यसको आरामद्वारा आधुनिक छ। बक्सर कपडा पुरातया कपासको बनाइन्छ। यसको केन्द्रीय भागमा रग्बी कपडाहरू एक डबल मोटाई छ।
रग्बी कपडाहरू: छुट्टिको लागि एक उपहार
तपाईंको द्वारा प्रस्तावित रेट्रो शैली को मान्छे को बक्सर सेक्सी रग्बी पसल भरिएको छ वर्ष भर। गर्मीमा, यसको छाला यसको प्रतिरोधी कपासको प्रशंसा गर्न अनुमति दिन्छ। यो शर्ट्स, बरमुडा, प्यान्ट वा जोगिंगका साथ सजिलै पहेंलो हुन्छ। उहाँ कोठामा र बाहिर बाहिरका सबै खेलकुद प्रविधिहरूमा साथ तपाईले साथ दिनुहुनेछ।
तपाइँका प्रियजनहरू क्रिसमसमा खुसी पार्न चाहनुहुन्छ? रूख अन्तर्गत अचम्मको सिर्जना गर्न आफ्नो अनौठो र मूल शैलीमा शर्त! यसको सान्त्वना र शैलीले पुरुषहरूलाई छेउमा पार्नेछ: कुनै नबिर्सनुहोस् र क्षणको प्रवृतिलाई क्रिसमसको लागि तपाईँले बिर्सनुहुन्न।
रेट्रो रग्बी बक्सर
नयाँ सेक्सी रग्बी संग्रहबाट विंटेज टी शर्ट
«एक असम्भव क्लासिक: एसआर (सेक्सी रग्बी) पुरुषको टी-शर्ट
रग्बी स्वेटशर्ट युनिसेक्स, कालातीत »